Caday Artist, Rinjiga Rinjiga Saliida, Rinjiga Rinjiga Biyaha - Fontainebleau
Nanchang Fontainebleau Qalabka Rinjiyeynta Warshadaha Co., Ltd.
Nanchang Fontainebleau Rinjiyeynta Qalabka Industrial Co., ltd waxay ku takhasustay wax soo saarka iyo iibinta burushka farshaxanka, oo ay ku jiraan biyo-biyoodka / saliidda / burushka qurxinta iyo burushyada qurxinta. Waxay leeyihiin astaan ​​u gaar ah- Maple Dahab ah, waxaa loo yiqiinay mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee farshaxanka ugu caansan Shiinaha ee Shiinaha. Waxay bixiyaan dhammaan noocyada adeegga OEM, sidoo kale waxay kaa caawin karaan inaad abuurto burush kuu gaar ah iyo summad. Xitaa haddii aad haysato xogta burushka, markaa way soo saari karaan, sida ku xusan codsigaaga inaad soo saarto burushyo badan oo kala duwan.
Noocyada burush rinji ee ugu da'da yar ee aan inta badan u isticmaalno rinjiyeynta waa sida soo socota: Nooca ugu horreeya waa fiyuusta dabiiciga ah, oo ah bristles. Oo ay ku jiraan bristles, timaha yey, timaha mink iyo wixii la mid ah. Qaybta labaad waa faybar kiimiko ah. Waxaan badanaa isticmaalnaa naylon. Burushka rinjiyeynta rinjiga cusub ee cusub ayaa loo iibsaday si loo sameeyo ...
Qaabka gubashada Burushka mid ka mid burushka ka soo burush oo dab ku gub. Waxaa jira ur gubanaya inta lagu jiro hawsha gubashada, waxayna isu rogaysaa dambas ka dib gubashada. Tani waa bristles dhabta ah. Burushka been abuurka ahi waa kuwo aan dhadhan lahayn ama waxay leeyihiin ur caag ah markay gubanayaan. Kadib markii ...
Ku saabsan warshadda, waxay soo shaqeysay in ka badan 30 sano, waxay leedahay khibrad hodan ah oo ku saabsan soosaarida burush rinji farshaxan.
Caday Fasalka Cuntada On Cake
Cadayashada Weyn ee Rinjiyeynta Taariikhda
Rinjiyeynta Wajiga iyo Jirka
Cadayasha Yar ee Qalabka Garaashka